M Malitere Ibi n’Okporo Ámá​—Otú O Si Kwụsị Ịṅụbiga Mmanya Ókè, Ịṅụ Ọgwụ Ọjọọ, na Ime Ihe Ike
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bashkir Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga (Malawi) Chitumbuka Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Edo English Estonian Faroese Fijian Finnish Fon French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kannada Kazakh Kikamba Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mapudungun Maya Mingrelian Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (South Africa) Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tsonga Turkish Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
“M Malitere Ibi n’Okporo Ámá”
Akụkọ Antonio Jiménez kọrọ
A Mụrụ M n’Afọ: 1955
Abụ M Onye: Spen
Ndụ M Biri: M Na-aṅụbu Ọgwụ Ọjọọ, Na-aṅụbiga Mmanya Ókè, Na-emekwa Ihe Ike
Ọ na-ewe ụfọdụ ndị oge tupu ha amụta ihe ná ndụ ọjọọ ha na-ebi. Ọ bụ otú ahụ ka ọ dị mụnwa. A mụrụ m na Baselona, bụ́ obodo nke abụọ kachanụ na Spen. Anyị bi n’ebe a na-akpọ Somorostro. Ọ dị n’akụkụ osimiri. Ihe e ji mara ebe ahụ bụ ime mpụ na ịtụ mgbere ọgwụ ọjọọ.
Nne na nna m mụrụ ụmụ itoolu. Ọ bụ mụnwa bụ nwa mbụ n’ime ha. Anyị dara ogbenye. N’ihi ya, papa m gwara m ka m gaa n’ebe a na-akụ tenis, na-atụtụrụ ha bọl ka ha na-akwụ m ụgwọ. Adị m afọ iri mgbe ahụ. M na-arụkwa ọrụ ahụ awa iri kwa ụbọchị. Ihe a m na-arụ mere ka m ghara iso ụmụaka ibe m gaa ụlọ akwụkwọ. Mgbe m dị afọ iri na anọ, m malitere ịrụ ọrụ n’ebe a na-akpụpụta ígwè. Ọ bụ mụnwa na-ahụ maka ígwè ọrụ anyị ji arụ ọrụ ebe ahụ.
Ebe m yi uwe e ji mara ìgwè ndị agha Spen dị n’ogbe ndị Spen dị n’ebe ugwu Afrịka mgbe m sonyere ha n’afọ 1975
N’afọ 1975, a kpọrọ m ka m banye amị. N’oge ahụ, ọ bụ iwu na onye ọ bụla ruru ịba amị ga-abarịrị ya. Ime ihe ọ bụla siri ike omume na-amasị m. N’ihi ya, m kwetara isonyere ìgwè ndị agha Spen nọ na Melilla nke dị n’ogbe ndị Spen dị n’ebe ugwu Afrịka. N’oge ahụ, m mikpuru onwe m n’ịṅụ ọgwụ ọjọọ na ịṅụbiga mmanya ókè.
Mgbe m hapụrụ ìgwè ndị agha ahụ, m laghachiri Baselona ma hiwe otu òtù ọjọọ. Anyị na-ezu ihe ọ bụla anyị hụrụ, ree ya, were ego anyị retere zụọ ọgwụ ọjọọ anyị na-aṅụ. M bidokwara ịṅụ ọgwụ ọjọọ ndị ka ndị nke m na-aṅụbu akpa ike. Ịkwa iko, ịṅụ mmanya, na ịgba chaa chaa riri m isi. Ndụ ọjọọ a m na-ebi mere ka m na-emekwu ihe ike. M na-eji obere mma, egbugbu ma ọ bụkwanụ mma nnukwu aga ebe ọ bụla m na-aga. Ụjọ anaghịkwanụ atụ m iji nke ọ bụla n’ime ha eme ihe mgbe ọ bụla ọ dị mkpa.
E nwere mgbe mụ na ndị òtù m zuru otu ụgbọala, ndị uwe ojii achụwa anyị. O yichara ihe a na-eme na fim. Anyị ji ụgbọala ahụ gbaa ihe dị ka kilomita iri atọ, ruo mgbe ndị uwe ojii malitere ịgba anyị égbè. Onye na-anyara anyị ụgbọala mechara kpọkaa ụgbọala anyị ahụ mgbe ha nọ na-achụ anyị, anyị niile agbaa ọsọ. Mgbe papa m matara gbasara ya, ọ chụpụrụ m n’ụlọ anyị.
M malitere ihi n’okporo ámá ruo afọ ise. M na-ehi n’ọnụ ụzọ ndị mmadụ, n’ime nnukwu ụgbọala, n’oche ndị dị n’ebe ndị mmadụ na-ezuru ike, nakwa n’ebe a na-eli ozu. O nwedịrị mgbe m bitụrụ n’ọgba. Ndụ m enweghị isi. M na-echeta na o nwere mgbe m ṅụchara ọgwụ ọjọọ, malite imerụ onwe m ahụ́ n’aka. Àpà ya ka dị m n’aka ruo taa.
Mgbe m dị afọ iri abụọ na asatọ, mama m bịara na-achọgharị m. Mgbe ọ chọtara m, ọ gwara m lọghachi n’ụlọ. M kwetara ma gwa ya na m ga-agbanwe. Ma, o were m oge tupu mụ emezuo ihe ahụ m kwere ya ná nkwa.
N’otu ehihie, Ndịàmà Jehova abụọ kụrụ aka n’ọnụ ụzọ anyị, mụ apụta, ha eziwe m ozi ọma. Ka ha nọ na-ezi m ozi ọma, papa m nọ n’ime ụlọ jiri olu ike gwa m ka m hapụ ha, mechie ụzọ ma bata n’ime ụlọ. Ebe ọ bụ na anaghị m achọ ka mmadụ na-atụrụ m ihe m ga-eme, m gbachiri ya nkịtị. Ha nyere m obere akwụkwọ atọ. Obi tọrọ m ụtọ na ha nyere m akwụkwọ ndị ahụ. M jụrụ ha ebe ha na-enwe ọmụmụ ihe, ha agwa m. N’ime ụbọchị ole na ole, m gara n’Ụlọ Nzukọ Alaeze.
Ihe mbụ m chọpụtara ebe ahụ bụ na onye ọ bụla n’ime ha jikeere nke ọma. Ma, mụnwa bu ntutu ogologo, afụ ọnụ m rujukwara eruju, uwe m yi adịghịkwa mma n’anya. Ihe a niile mere ka o doo m anya na mụ na ha abụghị otu, ya emezie ka m nọrọ n’èzí Ụlọ Nzukọ Alaeze. Ma, o juru m anya mgbe m hụrụ otu onye mụ na ya nọbu n’òtù ọjọọ. Aha ya bụ Juan. O yi uwe dị mma n’anya. M mechara mata na ọ ghọrọ Onyeàmà Jehova n’ime otu afọ gara aga. Mgbe m hụrụ ya, m kataziri obi banye n’ime Ụlọ Nzukọ Alaeze. Ọ bụ ebe ahụ ka ndụ m malitere igbanwe.
Ha gwara m ka ha mụwara m Baịbụl, mụ ekweta. Ọ dịghị anya m mụwara Baịbụl, mụ amata na ọ bụrụ na m chọrọ ịna-eme ihe dị Chineke mma, na m kwesịrị ịkwụsị ihe ike m na-eme nakwa ndụ rụrụ arụ m na-ebi. Ịkwụsị ihe ndị ahụ adịghịrị m mfe. M mụtara na ọ bụrụ na m chọrọ ime ihe dị Jehova Chineke mma na m kwesịrị ‘ịgbanwe site n’ime ka uche m dị ọhụrụ.’ (Ndị Rom 12:2) Mgbe m matara na Jehova na-eme ebere, o metụrụ m n’ahụ́. N’agbanyeghị ihe niile m mejọrọ, m ghọtara na ọ na-enye m ohere ka m gbanwee. Ihe m mụtara banyere Jehova Chineke ruru m n’obi. Ọ bịara doo m anya na e nwere Onye kere ihe niile bụ́ onye ihe banyere m na-emetụ n’obi.​—1 Pita 5:​6, 7.
Ihe a mere ka m malite ime mgbanwe ná ndụ m. Dị ka ihe atụ, mgbe anyị mụrụ banyere ịṅụ sịga, m gwara onwe m, sị, ‘Ọ bụrụ na Jehova chọrọ ka m dịrị ọcha n’enweghị ntụpọ ọ bụla, ọ pụtara na m ga-akwụsị ịṅụ sịga.’ (2 Ndị Kọrịnt 7:1) M tụfuru sịga ndị m nwere ozugbo.
M kwesịkwara ịkwụsị ịṅụ ọgwụ ọjọọ na ire ya. M gbara ezigbo mbọ, ya ewetụkwa oge tupu mụ akwụsị ya. M ma na ọ bụrụ na m chọrọ ịkwụsị ya, na mụ na ndị enyi m mbụ kwesịrị ịkwụsị ịna-akpa. Ha anaghị enyere m aka ime ka mụ na Chineke dịrị ná mma. Ka oge na-aga, m bịara tụkwasịkwuo Chineke obi. Ndị enyi m nwetara ugbu a n’ọgbakọ nyekwaara m aka. E nwetụbeghị ndị hụrụ m n’anya ma na-eche banyere m otú ụmụnna ndị a mere. Ka ọnwa ụfọdụ gara, m kwụsịrị ịṅụ ọgwụ ọjọọ ma ‘yiri mmadụ ọhụrụ ahụ,’ nke ga-enyere m aka ime ihe dị Chineke mma. (Ndị Efesọs 4:24) N’Ọgọst afọ 1985, e mere m baptizim, mụ aghọọ Onyeàmà Jehova.
Ihe m mụtara na Baịbụl mere ka ndụ m ka mma. O mere ka m kwụsị ndụ ọjọọ m na-ebi nke gaara emebi ahụ́ m ma mee ka ndị mmadụ ghara ịna-akwanyere m ùgwù. Ihe karịrị mmadụ iri atọ n’ime ndị bụbu ndị enyi m nwụchuru ọnwụ n’ihi ọrịa obiri n’ájá ọcha ma ọ bụ ọrịa ndị ọzọ ọgwụ ọjọọ na-akpata. Obi dị m ezigbo ụtọ na ime ihe Baịbụl kwuru mere ka ihe ndị ahụ mere ha ghara ime m.
Anaghịzi m ebu mma na egbugbu ndị ahụ m naara eji eme ihe ike. M na-ebuzi Baịbụl. Amaghị m na m ga-emecha buwe Baịbụl ma jiri ya na-enyere ndị mmadụ aka. Taa, mụ na nwunye m na-eji oge anyị niile akụziri ndị mmadụ Baịbụl.
Mama m na papa m emechaghị ghọọ Ndịàmà Jehova. Ma, obi dị ha ụtọ n’ihi otú Baịbụl si baara m uru. O nwedịrị mgbe papa m gbachiteere Ndịàmà Jehova n’ihu ndị niile ya na ha na-arụ ọrụ. O doro ya anya na ndụ m akala mma ugbu a n’ihi na m bụzi Onyeàmà Jehova. Mama m na-ekwukarị na ọ gaara adị mma ma a sị na m bidoro n’oge mụnwa Baịbụl. Ekwetara m ihe a o kwuru.
Ihe mere m emeela ka m mata na ọ baghị uru mmadụ iche na ịṅụ ọgwụ ọjọọ na ime omume ndị ọzọ rụrụ arụ ga-eme ka ọ na-enwe obi ụtọ ná ndụ. Ugbu a, m na-enwe ezigbo obi ụtọ ma m na-akụziri ndị ọzọ Okwu Chineke, bụ́ ihe zọrọ m ndụ.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ “M Malitere Ibi n’Okporo Ámá”
M Malitere Ibi n’Okporo Ámá
ijwcl isiokwu 1
“M Malitere Ichesi Echiche Ike Ma Ò nwere Uru Ndụ M Na-ebi Baara M”